All Shampoo Conditioner Hair Care Shampoo Hair Treatment Conditioner Hair Coloring Hair Serum & Tonic Styling Products Hair Dryer Hair Straightener Hair Serum & Tonic Body Lotion Shower,Body Wash & Scrub Cotton & Wet Tissue Wet Tissues Toner & Lotion Emulsion Essence Facial Cream Skin Care Set Facial Cleansers Skin Repair & Serum Women's Perfume Toothpaste Foundation Lipstick UV Cream & Suncream Gift Set Wedding Gift Seasonal Gift For Him For Her Toothbrush BB & CC Cream SunCream Facial Mask Chairs & Table Bar Soap Powder
Uniq Han Uniq Han's Shop
Since2August 2018 To till Now
14,500.00 Ks |
2,175.00 Ks OFF
11,900.00 Ks |
1,785.00 Ks OFF
Organia Aroma Green Body Lotion 400ml
12,500.00 Ks |
1,250.00 Ks OFF
Organia White Milk Body Lotion 400ml
62,000.00 Ks |
12,400.00 Ks OFF
52,000.00 Ks |
10,400.00 Ks OFF
Organia Relaxing Olive Body Lotion400g
Natuer Be Foundation No-23
26,500.00 Ks |
5,300.00 Ks OFF
Natuer Be Twoway Cake No-23
32,000.00 Ks |
6,400.00 Ks OFF
All Products 24 Out Of 116
Hair Serum & Tonic (1)
Shower,Body Wash & Scrub (6)
Cotton & Wet Tissue (5)
Toner & Lotion (4)
Skin Repair & Serum (3)
UV Cream & Suncream (5)
Chairs & Table (2)
62,000.00 Ks 49,600.00 Ks 49600.0 MMK
52,000.00 Ks 41,600.00 Ks 41600.0 MMK
". Natuer Be Foundation ဟာ Gold, Chamomile, Rose နှင့် National Flower စတဲ့ သဘာဝ ပန်းပေါင်းစုံတို့ရဲ့ အဆီအနှစ်အစွမ်းကြောင့် အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးကာ ပန်းပွင့်ဖတ်လေးများကဲ့သို့ ပေါ့ပါးနူးညံ့မှုကို ရရှိစေခြင်း။
. ပင်လယ်မှရရှိသည့်Sea Mineral Power သတ္တုဓာတ်များအပြင် ရေဓာတ်ကိုပါ ဖြည့်တင်းပေးကာ အသားအရေအတွက် လိုအပ်သည့် အစိုဓာတ်ကို အပြည့်အ၀ရရှိစေခြင်း။
. lavender Coating Powder က အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။
. နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှ စတင်ကာ အမဲစက် တင်းတိပ် အရေးအကြောင်းများအထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။
. အဆီပြန်ခြင်းကင်းဝေးကာ မိတ်ကပ်သားကြာရှည်ခံစေပြီး တောက်ပလင်းလက်ပြီး သဘာဝဆန်တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေခြင်း။"
32,000.00 Ks 25,600.00 Ks 25600.0 MMK
" . Gold, Chamomile, Rose နှင့် National Flower ပန်းပေါင်းစုံတို့ရဲ့ အဆီအနှစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက်နူးညံ့သည့် အထိအတွေ့အားခံစားနိုင်ခြင်း။
. Essence type ပုံစံဖြစ်သည့်အတွက် အလွယ်တကူ စိမ့်ဝင်စွဲကပ်စေကာ lavender Coating Powder က အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။
. လက်ဖြင့် အရမ်း စွဲညှိ လိမ်းစရာမလိုသည့်အတွက် အသားအရေ ထိခိုက်မှုမရှိခြင်း။
26,500.00 Ks 21,200.00 Ks 21200.0 MMK
Leaders Labotica Skin Soft Honey Mask
အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး အချဉ်ဖောက်ထားသည့် ပျားရည်အစွမ်းကြောင့် လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးကာ ကျန်းမာသော အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေပြီး နုပျိုစေခြင်း။ Collagen ဆဲလ်များ ကြီးထွားအောင် ကူညီပေးပြီး အသားရေ တင်းရင်းမှုကို ရရှိစေခြင်း။ ယူကလစ်ပင်မှ ထုတ်ယူရရှိသည့် Tencel Fibers နဲ့ ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် ပုံမှန်ထက် စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းပိုမိုကောင်းမွန်က ပိုမိုနုးညံ့တဲ့ခံစားမှုကို ရရှိစေခြင်း။
Treats: အသားအရေ လျော့တွဲခြင်း။ အရေးအကြောင်းများကို သက်သာစေပြီး မျက်နှာလိုင်းအား ပြန်လည် ပုံဖော်လိုသူများ၊ အသားအရေ မွဲခြောက်ကြမ်းတမ်းနေသူများ။
Effectiveness: အာဟာရဓာတ်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ဖြည့်တင်းပေးခြင်း။ Collagen ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။ အသားအရေတင်းရင်းပြီး အရေးအကြောင်းများအား သက်သာစေခြင်း။
1,500.00 Ks 1500.0 MMK
Leaders Labotica Skin Soft Green Tea Mask
အဆီဓာတ်နှင့် ရေဓာတ်ထွက်ရှိမှုအား ထိန်းညှိပေးခြင်း။ အချဉ်ဖောက်ထားသည့် လက်ဖက်စိမ်းအဆီအနှစ်က အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတားဆီးပေးပြီး အသားအရေ နီခြင်းနှင့် ယားယံခြင်းများကို ထိန်းညှိပေးခြင်း။ ယူကလစ်ပင်မှ ထုတ်ယူရရှိသည့် Tencel Fibers နဲ့ ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် ပုံမှန်ထက် စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းပိုမိုကောင်းမွန်က ပိုမိုနုးညံ့တဲ့ခံစားမှုကို ရရှိစေခြင်း။
Treats: ၀က်ခြံ ထွက်ခြင်းကို သက်သာစေခြင်း။ နီရဲ ယားယံခြင်းကို သက်သာစေခြင်း။ အဆီဓာတ်နှင့် ရေဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးခြင်း။
၀က်ခြံထွက်ခြင်းကို ဟန့်တားပေးကာ အဆီအလွန်အကျွံ့ထွက်ခြင်းအား လျှော့ချပေးခြင်း။ အသားရေ နီရဲ ယားယံခြင်းကို သက်သာစေခြင်း။ အမဲစက်ဖြစ်စေသည့် ရောင်ခြယ်ဆဲလ်များ ကပ်ညှိခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
Leaders Labotica Skin Soft Rice Mask
အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေခြင်း။ အချဉ်ဖောက်ထားသည့် ဆန် အဆီအနှစ်က အသားအရေ မဲညစ်ခြင်းကို သက်သာစေကာ ဆဲလ်သစ် ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကို ကူညီပေးပြီး ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း။ ယူကလစ်ပင်မှ ထုတ်ယူရရှိသည့် Tencel Fibers နဲ့ ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် ပုံမှန်ထက် စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းပိုမိုကောင်းမွန်က ပိုမိုနုးညံ့သည့် ခံစားမှုကို ရရှိစေခြင်း။
အသားအရေ မဲညစ်ခြင်း။ အသားအရောင် မညီခြင်း။ အမဲစက်များအား သက်သာစေခြင်း
ဆဲလ်သစ်ပြန်လည်မွေးဖွားမှုကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။ အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေခြင်း။ အမဲစက် ထွက်ရှိမှုကို လျော့ချပေးပြီး အသားအရောင်အား ထိန်းညှိပေးခြင်း။
Leaders Labotica Skin Soft Bamboo Mask
ရေဓာတ်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ဖြည့်တင်းပေးခြင်း။ အချဉ်ဖောက်ထားသည့် ၀ါးပင်အဆီအနှစ် အာနိသင်ကြောင့် နုပျိုမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း။ ယူကလစ်ပင်မှ ထုတ်ယူရရှိသည့် Tencel Fibers နဲ့ ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် ပုံမှန်ထက် စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းပိုမိုကောင်းမွန်က ပိုမိုနုးညံ့သည့်ခံစားမှုကို ရရှိစေခြင်း။
ခြောက်သွေ့ ကြမ်းတမ်းသော အသားအရေ။ အသားအရေ မညီခြင်း။ နီရဲ ရောင်ရမ်းခြင်း။
ရေဓတ်ဖြည့်တင်းပေးခြင်း။ နီရဲရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေခြင်း အသားအရောင် ညီစေခြင်း။
Leaders Labotica Ture Nature Moisturizing Mask
Moisturizing အာနိသင်ကို အကောင်းဆုံး ပေးစွမ်းနိုင်သည့် Coconut အဆီအနှစ်ပါဝင်ကာ အသားအရေကို နူးညံ့စေခြင်း။
Treats: ခြောက်သွေ့သော အသားအရေ။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း အသားအရေ။ ကြမ်းတမ်းမွဲခြောက်ခြင်း။
Effectiveness:အစိုဓာတ်ကို ထိထိရောက်ရောက်ပေးစွမ်းပြီး ချောမွေ့စေခြင်း။
အဓိက လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်ကို ပေးစွမ်းခြင်း။
အဆီဓာတ်နှင့် ရေဓာတ် မျှတအောင်ထိန်းညှိပေးခြင်း။
2,000.00 Ks 2000.0 MMK
Leaders Labotica Ture Nature Revitalizing Mask
"အသားအရေကို အာဟာရဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးပြီး သက်ဝင်တောက်ပစေခြင်း။ Hibiscus Sabdariffa Flower အဆီအနှစ်က အရေပြားဆဲလ်များ ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ကျန်းမာသော အသားအရေကို ဖန်တီးပေးခြင်း။
Treats: တင်းရင်း နုပျိုစေခြင်း။ အိုမင်းနေသော အသားအရေအတွက် သင့်တော်ခြင်း။ ကြမ်းတမ်းမွဲခြောက်ခြင်းကို သက်သာစေခြင်း။
Effectiveness: အရေအကြောင်းများနှင့် အသားအရေ လျော့တွဲခြင်းကို သက်သာစေခြင်း။ ရေဓာတ်အပြည့်အ၀ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ခြင်း။ တင်းရင်းပြီး စိုပြေချောမွေ့စေခြင်း။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းအား တားဆီးပေးခြင်း။"
Leaders Labotica Ture Nature Brightening Mask
"Detail:အသားအရေကို မူလထက် ဖြူစင်တောက်ပစေခြင်း။ Rosa Damascena Flower အဆီအနှစ်က တောက်ပမှုနှင့် အစိုဓာတ်ကို အပြည့်ဝပေးစွမ်းပြီး အသားရေကို ဖြူစင်တောက်ပစေပါသည်။
• ကြမ်းတမ်းမွဲခြောက်နေသောအသားအရေ • အသားအရေ မညီခြင်း • အမဲစက် အစက်အပြောက်ရှိသော အသားအရေ
• ရေဓာတ်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ဖြည့်တင်းပေးခြင်း
• အသားအရေကို ချောမွေ့ပြီး စိုပြေစေခြင်း
• မျက်နှာအား သက်ဝင်တောက်ပပြီး ကြည်လင်စေခြင်း"
Leaders Labotica Ture Nature Pore Cleansing Mask
"Detail: ချွေးပေါက်အတွင်းရှိ အညစ်ကြေးများကို သန့်စင်ပေးပြီး အသားအရေ ချောမွေ့စေခြင်း။ Camellia Sinensis Leaf မှရရှိသည့် အဆီအနှစ်ပါဝင်ကာ ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေပြီး စိုပြေချောမွေ့သော အသားအရေကို ဖန်တီးပေးခြင်း။
• ၀က်ခြံ • ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်း • အမာရွတ်များ
• ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေခြင်း
• အဆီပြန်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးခြင်း
• အသားအရေရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေပြီး ၀က်ခြံပြသာနာများကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း"
13,000.00 Ks 13000.0 MMK
Kerasys AK Gift Set Limited Edition
1.Limited Edition Set
- KS Damage Clinic Plus Shampoo 500 ml (2) pcs
-Shower Mate Berry & Yogurt soap 80 g (2) pcs
Bullsone Balance Seat Large Size Gray
(1.28 kg, Width 430mm x Depth 415mm x Height 25mm)
Material: cover top (88% nylon, 10% polyester, 2% polyurethane), bottom cover (93% polyurethane, 7% polyester), filler (100% elastomer gel)
150,000.00 Ks 150000.0 MMK
Bullsone Balance Seat Medium Size
130,000.00 Ks 130000.0 MMK
47,000.00 Ks 47000.0 MMK
45,000.00 Ks 45000.0 MMK
1,800.00 Ks 1800.0 MMK